XAL khaladka "com.google.process.gapps hawshiisu way joogsatay" | War gadget
Ignacio Sala | | Mobiles, Software, Tababarada
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ay marwalba Android la kulanto ficil ahaan tan iyo markii ay suuqa ku dhufatay, waxay ahayd iswaafajinta qalabka meesha lagu rakibay, maaddaama aan si gaar ah loogu talagalay qalab gaar ah, sida haddii ay ku dhacdo Apple ee iOS iyo iPhone. Tani, oo mahan wax kale, waa dhibaatada ugu weyn ee soo-saarayaasha ay helaan markay cusbooneysiinayaan qalabkooda noocyo cusub, tan iyo ma aha oo kaliya inay tahay inay ku hagaajiyaan nooca Android qalabkooda, laakiin sidoo kale waa inay ku daraan lakabka farxadda leh ee shakhsiyeynta.
Laakiin xitaa sidaas oo ay tahay, marwalba waan heli karnaa cillad, midkoodna nooca Android-ka ah oo aan si buuxda loogu habeynin moodelkeenna terminal, ama lakabka habeynta darteed. Mid ka mid ah khaladaadka ugu caamsan wuxuu saameeyaa labada codsi iyo howlaha xarunta. Qodobkaan waxaan diirada ku saaraynaa Hagaaji qaladka "com.google.process.gapps hawshu way joogsatay", qalad inta badan kiisaska noo oggolaanayn inaan ka soo dejino barnaamijyada Google Play Store.
Khaladkan wuxuu bilaabay inuu ka soo muuqdo Android Kitkat 4.4.2 wixii markaa ka dambeeyayna waxay umuuqataa in ragga Google kujira aysan dhibsanayn inay helaan xal aan ku qasbi karin dadka isticmaala inay adeegsadaan internetka, tan iyo xitaa noocyadii ugu dambeeyay ee Android At waqtiga qorista maqaalkan waxaan ku jirnaa Android 8.0 Oreo, wali waa dhibaato ka badan soo noqnoqoshada boosteejooyin badan. Hoos waxaan kuugu soo bandhigeynaa xalal kala duwan oo ku saabsan dhibaatadan, iyadoo laga fogaanayo xalka ugu daran markasta kaas oo ka kooban dib u dejin adag oo qalabka ah iyo tirtirka dhamaan waxyaabaha ku jira.
1 Nadiifi xaanshiyaha arjiga ee dhibaatooyinka ina siinaya
2 Tirtir barnaamijyadi ugu dambeeyay ee aad rakibtay
3 Tirtir cusbooneysiintii ugu dambeysay ee aad soo dejiso
4 Dib u dejiso dookhyada barnaamijka
5 Tirtir xogta adeegyada Google Play
6 Qalabka dib u dejinta warshadda
Nadiifi xaanshiyaha arjiga ee dhibaatooyinka ina siinaya
Haddii qaladkani si joogto ah u dhaco markasta oo aad furto codsi, waxay u badan tahay in dalabka laftiisu yahay kan burburaya nidaamka, markaa tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaan qaadno waa nadiifi keydkeeda.
Si loo nadiifiyo keydka arjiga, kaliya waa inaan tagnaa Settings> Araajida oo aan xulannaa arjiga su'aasha ah. Markaad gujineyso, ma aadeyno salka iyo dhagsii Clear khasnado.
Tirtir barnaamijyadi ugu dambeeyay ee aad rakibtay
Markii aan dhibaatada ka helno codsi lagu rakibay aaladdeenna in muddo ah, waa suurtagal in ay ku jirto codsigii ugu dambeeyay ee aan rakibnay, wax nasiib daro ku badan Android.
Si loo xaliyo dhibaatadan hawlgalka, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah ka degso arjiga, ama si toos ah iyada oo loo marayo Settings> Codsiyada, ama iyada oo loo marayo codsi dhinac saddexaad ah oo noo oggolaanaya inaan qabanno shaqadan.
Tirtir cusbooneysiintii ugu dambeysay ee aad soo dejiso
Haddii tan iyo markii aan rakibnay cusboonaysiinta dalabka, ay bilaabatay inay na tusto farriintaas, dhibaatada waxaa laga heli karaa casriyeyntii ugu dambeysay ee dalabka aan rakibnay, si aan meesha uga saarno dhibaatooyinka, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ka saarno cusbooneysiinta.
Si aan uga tirtirno cusbooneysiinta, waxaan dib ugu laabaneynaa Dejinta> Codsiyada oo waxaan doorannaa arjiga su'aasha ah. Xagga sare, waxaan ka helaynaa xulashada Joojinta Xoogga iyo Kordhin cusbooneysiinta. Xulashada kan dambe, qalabkeennu wuxuu baabi'in doonaa wixii raad ah ee casriyeyntii ugu dambeysay wuxuuna ka tagi doonaa dalabka sidii uu ahaa bilowgii, markuu si sax ah u shaqeynayay.
Dib u dejiso dookhyada barnaamijka
Xalka ugu dambeeya ee aan soo jeedineyno, kahor intaanan guda galin maxaa waxay u badan tahay inay noqon doonto isha dhibaatada taasna xiriir lama lahan codsiyada si toos ah, laakiin nidaamka, dib ayaan u dajin karnaa dookhyada dalabka. Si aan dib ugu dhigno dookhyada dalabka waxaan aadi doonnaa Settings> Codsiyada oo guji dhammaan tabta.
Marka xigta, waxaan tagnaa liiska ku yaal geeska midig ee kore ee shaashadda, oo ay metelaan seddex dhibcood oo toosan, oo xulo Dib-u-dajinta doorbidyada. Kahor xaqiijinta nidaamka, Android ayaa na tusi doonta farriin xaqiijinaysa in dookhyada dhammaan codsiyada naafada ah dib loo soo celin doono, ogeysiisyada codsiyada naafada ah, codsiyada falalka caadiga ah, xaddidaadda xogta asalka ee codsiyada iyo dhammaan xaddidaadda oggolaanshaha.
Mar alla markii aan hawshan fulinno, oo aan xaqiijinno sida codsigii dhibaatooyinka na siiyey ay mar labaad u soo shaqeysay, waa inaan mar kale qabanno deji goobaha shaqsi ahaan Codsi kastaa wuxuu lahaa, sida loo heli karo goobta, xogta moobiilka ...
Tirtir xogta adeegyada Google Play
Haddii ka dib markaad isku daydo dhammaan xulashooyinka hore, wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in dhibaatadu aysan ku noolayn codsiyada laftooda, laakiin inaan ka helno adeegyada Google Play. Adeegyada Google Play waa nidaamka nidaamka Android ee waxay u oggolaaneysaa inay lahaato dhammaan codsiyada nidaamka had iyo jeer waa la cusbooneysiiyaa waxayna sidoo kale hubiyaan in dhammaan codsiyada marwalba lagu cusbooneysiiyo nooca ugu dambeeyay ee la heli karo.
Marka sidan la sameeyo, dhammaan dookhyada iyo dejimaha lagu dejiyay Google Play waa la tirtiri doonaa. dib u soo celinta goobaha aasaasiga ah. Si aan xogta uga tirtirno adeegyada Google Play, waxaan aadeynaa Settings> Codsiyada oo waxaan gujineynaa Adeegyada Google Play. Kadibna waxaan aadeynaa Tirtirida xogta, gudaha qeybta Kaydinta oo aan xaqiijineynaa tirtirka dhammaan xogta arjigan si joogto ah.
Qalabka dib u dejinta warshadda
Haddii qaababkan midkoodna uusan hagaajin dhibaatada com.google.process.gapps, waa suurtagal, inkasta oo aysan u badnayn, in dhibaatadu ka jirto cusbooneysiintii ugu dambeysay ee qalabka la helay, markaa si aan meesha uga saarno, waa inaan warshad dib u dejino qalabka. Markaad fuliso hawshan, qalabku wuxuu ku laaban doonaa nooca asalka ah ee Android kaas oo uu suuqa ugu yimid.
Si loo soo celiyo goobihii warshadda ee qalabka, waa inaan tagnaa Settings> Backup oo dib u dejino oo aan xusho ikhtiyaarka dib u dejinta xogta Factory. Nidaamkani wuxuu tirtiri doonaa dhammaan codsiyada, iyo sidoo kale dhammaan sawirrada iyo xogta ku jirta boosteejada, marka ugu horreyntii waa inaan nuqul ka sameysanno dhammaan xogta aan dooneyno inaan xafidno, gaar ahaan sawirrada iyo fiidiyowyada aan soo qaadnay qalabka, tan iyo goor dambe ma jiri doonto wado lagu soo celiyo iyaga a posteriori, codsiyo badan oo aan tijaabinno.
Hal ikhtiyaar in lagu sameeyo nuqulkan ayaa ah inaad gasho a kaadhka xusuusta qalabka iyo dhaqaajinta dhammaan sawirrada iyo fiidiyowyada, iyo sidoo kale xogta, ee aan dooneyno inaan xafidno, si aan mar labaad gacanta ugu hayno markaan soo celinno qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Sida loo hagaajiyo "com.google.process.gapps process has istaagay" qalad
Waad salaaman tahay, qaladkan waan helayaa laakiin xitaa iima ogola in aan galo goobaha ama meelkasta maxaa yeelay fariinta mar labaad ayey soo muuqaneysaa ... hadii ay ku jirto goobaha ... dejimaha ayaa istaagey ... iyo wixii la mid ah wax walboo aan isku dayo in aan galo Marka xalka aad ku bixiso madashan aniga aniga ansax iima ahan. Ma jiraa qaacido lagu soo celiyo kiniiniga warshada adigoon galin wax ikhtiyaar ah? maxaa yeelay xal kale uma arko ... hadaad mid uun ogtahay waan jeclaan lahaa hadaad i caawin karto
Ku jawaab veronica
Waan ku raacsanahay faallooyinkii hore, sharraxaadda ay bixiyeenna waa xitaa caqli-gal, maxaa yeelay haddii dhibaatadu tahay inaysan siinaynin fursad maxaa yeelay dalabkii waa la joojiyay, waxaad dhahdo waa wax aan macquul ahayn waayo sidee ayuu qofku u galaa inuu tirtiro xogta keydka, haddii mid walba codsi ayaa kuu sheegaya isla,
Waan ku raacsanahay faallooyinkii hore, sharraxaadda ay bixiyeenna waa xitaa caqli-gal, maxaa yeelay haddii dhibaatadu tahay inaysan siinaynin fursad maxaa yeelay dalabkii waa la joojiyay, waxaad dhahdo waa wax aan macquul ahayn waayo sidee ayuu qofku u galaa inuu tirtiro xogta keydka, haddii mid walba codsi ayaa isku mid ah, mmmmm
Heshiisyadii ugu fiicnaa ee Amazon ee maanta (31-01-2018)
HTC waxay lumisay waaxdeeda R&D iyadoo lagu beddelay $ 1.100 bilyan